ग्रेट वाल मोटर्सका तीन गाडी सार्वजनिक, मूल्य कति ? – Makalukhabar.com
ग्रेट वाल मोटर्सका तीन गाडी सार्वजनिक, मूल्य कति ?
२०७८ साउन ५ गते १४:४८
काठमाडौं । ग्रेट वाल मोटर्सका तीन नयाँ मोडलका गाडी सार्वजनिक भएका छन् । कम्पनीले सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै जिडब्ल्युएमको थर्ड जेन हाभल एच-६, हाभल जोलिओन र पोइर गाडी सार्वजनिक गरेको हो । योसँगै कम्पनीले नेपाली बजारमा आधिकारिक रूपमा प्रवेश गरेको छ।
थर्ड जेन हभाल एच ६
बढी पावर र थुप्रै लक्जरी विशेषता भएको थर्ड जेन हभाल एच-६ एसयुभी हो । यसमा २.० लिटर पेट्रोल टर्बो इन्जिन जडान छ । यसले १५० किलोवाटको पावर र ३२० एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । ७२ प्रतिशत उच्च गुणस्तरीय स्टिलले बनेको यो गाडीको बनावट निकै मजबुत र स्थिरता प्रदान गर्ने खालको रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
यसको बाहिरी र भित्री आवरण आकर्षक छ । यसमा भएको पानोरामिक सनरुफ, अटोमेटिक वाइपर, मल्टी फङ्सनल स्टेरिङ, आठ तरिकाले मिलाउन मिल्ने ड्राइभर सिट, ताररहित चार्जिङले गाडीलाई नयाँ स्वरुप दिन्छ ।
गाडीमा आठवटा एअर ब्याग, ३६० डिग्री हेर्न मिल्ने क्यामरा, एचएचसी (हिल होल्ड कन्ट्रोल), एबिएस प्लस इबिडी सुविधा र एन्टी-कोलिजन संयन्त्र, जस्तै एससिएम (सेकेन्ड कोलिजन संयन्त्र) र एफएम (फर्वार्ड कोलिजन संयन्त्र) ले दुर्घटनाको सम्भावना कम गर्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ।
यसमा भएको इन ब्युल्ट इन्टेलिजेन्ट मोबिलिटीले अधिकतम स्पीडमा एल-२ स्तरको अटोमेटिक एसिसी ड्राइभको आनन्द प्रदान गर्छ । ट्राफिक सिग्नल चिन्ने र लेनमा रही रहने व्यवस्थाले गाडी गुडाउने चालकलाई सुरक्षा र गाडीमाथि आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा भएको अनुभूति दिने कम्पनीले दाबी गरेको छ । त्यस्तै गाडीको भित्री बनावट, लेदर सिट र खुला रूपमा खुट्टा राख्न मिल्ने ठाउँले चालक र गाडी चढ्ने हरेकलाई सहज अनुभूति दिन्छ ।
थर्ड जेन हभाल एच-६ तीन रङमा उपलब्ध छ- हेमिल्टन ह्वाइट, अयर्स ग्रे र अट्लान्टिक ब्लू । कम्पनीले यसको सुरूवाती मूल्य ९६ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँ तोकेको छ ।
हभाल जोलिओनको मोडल पनि तीन संस्करणमा बजार प्रवेश गरेको छ । गाडीमा भएको १.५ लिटरको टर्बो पेट्रोल इन्जिनले ११० किलोवाट पावर र २२० एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ ।
यसमा भएको १३३ एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्सले गाडी नेपालको जस्तोसुकै सडकमा सजिलै चलाउन सकिने कम्पनीको दाबी छ । गाडीमा चार किसिमको ड्राइभ मोड र विद्युतीय पार्किङ ब्रेकिङ प्रविधि छ ।
त्यस्तै गाडीको ७३ प्रतिशत भाग उच्च गुणस्तरीय स्टीलले बनेकाले यसमा भिन्न र मजबुत स्थिरता तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
हभाल जोलिओनमा पानोरामिक सनरुफ, अटोमेटिक वाइपर, मल्टी फंसनल स्टेरिङ र पेडल सिफ्टर, ६ तरिकाले मिलाउन मिल्ने ड्राइभर सिट, आठवटा एअर ब्याग, आरामदायी लेदर सिट एबिएस, हिल होल्ड कन्ट्रोल, हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल, इभेन्ट डाटा रेकर्डर, टच स्क्रिन र एन्टी–कोलिजन संयन्त्रजस्ता विशेषता छन् ।
त्यस्तै गाडीको अगाडी भागमा, एलइडी लाइट र पछाडि फग लाइट छ । हभाल जोलिओन पाँच रङमा उपलब्ध हुनेछ- ब्लु (निलो), ब्ल्याक (कालो), ग्रे (खरानी रंग), हेमिल्टन ह्वाइट (सेतो) र मार्स रेड (रातो) ।
कम्पनीले यो गाडीको सुरूवाती मूल्य ५५ लाख ४९ हजार ९सय ९९ रूपैयाँ तोकेको छ।
कम्पनीले दुइटा एसयूभीसँगै एउटा पिक-अप सेक्सनको गाडी सार्वजनिक गरेको हो । पोइर पिक-अप मोडल दुईवटा संस्करण- एलिट र पाइलटमा सार्वजनिक भएको हो ।
यो गाडीमा भएको २.० लिटरको डिजल इन्जिनले अधिकतम १२० किलोवाटको पावर र ४०० एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । गाडीको ८४ प्रतिशत आवरण उच्च गुणस्तरको स्टिलले बनेको कम्पनीको भनाइ छ ।
पिक-अप सेग्मेन्टमध्ये यो पोइरमा सनरुफ छ । गाडीलाई चाबीबिना स्टार्ट गर्न सकिन्छ । गाडीमा ६ तरिकाले मिलाउन मिल्ने ड्राइभर सिट, आठवटा एअर ब्याग, लेदर सिट, हिल होल्ड कन्ट्रोल र हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल, भेइकल स्टेबिलिटी कन्ट्रोल, ९ इन्चको टच स्क्रिन र एन्ड्रोइड सपोर्ट जस्ता विशेषता छन्। गाडीको अगाडि भागमा एलइडी लाइट र पछाडि भागमा फग लाइट पनि छ ।
कम्पनीले पोइर पिक-अपको मूल्य ६४ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रूपैयाँ तोकेको छ ।
ग्रेट वाल मोटर्स (जिडब्ल्युएम) चिनियाँ अटोमोबाइल्स उत्पादन कम्पनी हो । यसले सन् १९९८ देखि विभिन्न देशमा गाडी निर्यात सुरू गरेको हो । कम्पनीले ६० भन्दा बढी देशमा ५ सयभन्दा बढी वितरकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमार्फत आफ्नो गाडी निर्यात गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालका लागि विशाल ग्रुपको सहायक संस्था भी. जी. इम्पेक्स प्रालि.ग्रेट वाल मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता हो । कम्पनीले भविष्यमा ओरा विद्युतीय गाडी पनि नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ ।
कन्सूलरहरुको डिनमा गोल्छा नियुक्त, चौधरीको बिदाइ
बजाजको नयाँ शोरुम जनकपुरमा
होण्डा ग्राजियाका नयाँ मोडल नेपाली बजारमा
एनटर्क सुपर स्क्वाड पबजी मोबाइल च्याम्पियनसिप २०२१ सम्पन्न
मोटरहेड एमएच १५० अब नेपाली बजारमा, स्क्र्याम्बलर २५० पनि उपलब्ध
होण्डा सीभी ३५० डीएलएक्स बाइकको स्टक आउट
भेस्पा र अप्रिलिया स्कुटरको मनसून अफर